Musyoka: Millitariga Kenya Ganacsi sharci darro ah ayay ka wadaan Soomaaliya | KEYDMEDIA ONLINE
Musyoka: Millitariga Kenya Ganacsi sharci darro ah ayay ka wadaan Soomaaliya
Nairobi (KON) - Madaxweyne ku xigeenkii hore ee Kenya, Stephen Kalonzo Musyoka ayaa sheegay in Ciidamada Kenya ee ku sugan Jubbooyinka ay Soomaaliya ka sameeyaan Gacansi sharci darro ah, wuxuuna Xukuumadda Uhuru Kenyatta ku eedeyay inaysan waxba ka qaban.
Madaxweyne ku xigeenkii hore ee Kenya, Stephen Kalonzo Musyoka ayaa xili Xalaadda Siyaasaddeed ee Dalka Kenya ay cakirantahay sheegay in Ciidanka Kenya ay Soomaaliya ka sameeyaan Ganacsi sharci darro ah.
Kalonzo Musyoka oo ka mid ah hoggaamiyeyaasha Xisbiga mucaaradka CORD ayaa sheegay in Saraakiil sare oo ka tirsan Millitariga Kenya ay ciidanka Kenya ee ku sugan Koonfurta Soomaaliya u adeegsanayaan ganacsi sharci darro ah oo ay kamid tahay iibinta dhuxusha laga dhoofinayo dekedda magaalada Kismaayo.
Kalonzo Musyoka ayaa sheegay in ka Ganacsiga Dhuxusha ay mamnuuc tahay, laakiin Saraakiishaan ay ka ganacsadaan, Xukuumadda Uhuru Kenyattana aysan tilaabi ka qaadin.
“Ciidamadeena wax wax howl ah oo ay ka hayaan Soomaaliya ma jirto, waxayna xuddun u yihiin dhibaatooyinka dhinaca Amniga ah ee ka dhacaya gudaha Kenya,” ayuu yiri Musyoka, asigoo ku daray "Xukuumadda Jubilee waxey taagereysa Ganacsi sharci darro ah oo ka socda Kismaayo, wuxuuna ganacsigaa bilow u yahay Musuq-Maasuqa Siyaasadeed"
Kalonzo ayaa Shalay khudbad ka jeediyay isu soo bax isbaheysiga mucaaradka CORD oo lagu qabtay beerta Xorriyadda Nairobi.
Dhanka kale, Mucaaradka dalka Kenya ayaa ka dalbaday Madaxweyne dalkaas, Uhuru Kenyatta inuu is-casilo, maadaama uu ku fashilmay Amniga Dalka.
Kumanaan Kenyan ah ayaa Shalay isugu yimid dibadbax xukuumadda looga soo horjeedo oo lagu qabtay Beerta Xorriyadda ee Nairobi iyada oo ay bilays aad u badan joogeen meesha, goor ay kacsan yihiin xiisadaha siyaasadda iyo qowmiyadaha.